'' Yangon Then & Now - Hotel Expo 2019" ပြပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ေြ ကာင်း သတင်းမီဒီယာမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား
- Yangon Hotel Expo 2019
About Hotel Expo 2019
Visitor / Buyer
Hosted Buyer List
History of Yangon
Special Listed Hotels
City Tours Plans
” Yangon Then & Now – Hotel Expo 2019″ ပြပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ေြ ကာင်း သတင်းမီဒီယာမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား
News Release about Yangon Then & Now – Hotel Expo 2019 Press and Media News
Release Event regarding International Hotel Exhibition named as “Yangon Then & Now – Hotel Expo 2019” was held on 25th June 2019, 3pm at Wyndham Grand Hotel, Yangon.
The Exhibition was initiated by Myanmar Hotelier Association (MHA) Yangon Zone, supported by Yangon Regional Government; will be organized by Fill In Company Limited and held at Myanmar Expo – Fortune Plaza (Thaketa) on three consecutive days 18th, 19th and 20th of October 2019.
News Release Event was attended by: – Karen Ethnic Affairs Minister Ms. Naw Pan Thinzar Myo from Yangon Reginal Government, – Director from Department of Yangon Hotels & Tourism, U Naing Win, – President, Vice President, Secretary and members from Yangon Hotelier Association (MHA Yangon Zone), – Members from related Associations and – Medias from Yangon.
After Minister Ms. Naw Pan made an opening speech, U Naing Win, Director from Department of Yangon Hotels & Tourism; U Tin Myint, President from MHA Yangon Zone; U Thiha Aung, President of Exhibition Event Committee, Daw Khin Mi Mi Toe and Daw Lei Yee Naing who are Operation Director and Creative Director of Fill In Co., Ltd.; had explained about the Exhibition and answered the questions from Medias accordingly.
မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ရန်ကုန်ဇုန်)မှ ဦးစီး၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Fill In Co., Ltd မှတာဝန်ယူ စီစဉ်ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာဟိုတယ်ဆိုင်ရာပြပွဲ ” Yangon Then & Now – Hotel Expo 2019″ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀) သုံးရက်ဆက်တိုက် Myanmar Expo – Fortune Plaza (Thakayta) ၌ ကျင်းပရန်အတွက် သတင်းမီဒီယာများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားအား ယနေ့ (၂၅.၆.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၃နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Wyndham Grand Hotel Yangon ၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့်တကွ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်ဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ ရန်ကုန်ဇုန်မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ ညီနောင်အသင်းများမှ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများစွာ စုံစုံလင်လင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ဝန်ကြီးမှအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်ဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ရန်ကုန်ဇုန်)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့်၊ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသီဟအောင်၊ Fill In Co., Ltd. မှ Operation Director ဒေါ်ခင်မိမိတိုး တို့မှ သတင်းမီဒီယာများ၏မေးမြန်းချက်များအားပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပြီး Fill in Co. Ltd မှ Creative Director ဒေါ်လဲ့ရည်နိုင်မှ ပွဲအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက် ထားမှု့များကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
Tel : +959 767648312
Tel : +959 971995777,
Hotel Expo 2019 Secretariat
Fill in (ပြည့်စေ) Co., Ltd.
Fill in Design & Events
No.66/3, Yarzadarrit Road,9Ward,
East Dagon Tsp; Yangon, Myanmar.
Tel : +959 971995777 (Marketing Team)
+959 767648312 (Operation Team)
+959 777728682 (Sales Team)
+959 769692128 (Creative Team)
Copyright © 2019 Yangon Hotel Expo 2019. All Right Reserved. Powered by MEGA WEB STUDIO